Rashiya - ALinks
Best mabhangi muRussia
Dai 6, 2022 Shubham Sharma Banks, Rashiya
Bhanga guru nemabhangi ezvokutengeserana anoumba hurongwa hwebhangi hweRussia. Mabhangi eRussia uye masangano ekukweretesa anotariswa neBhangi reRussia, iro rinopawo mabhanga mvumo kumabhanga ari munyika. 239 mabhanga ane rezinesi repasi rose, iro
Dzimba uye rendi muRussia
January 17, 2022 Demi dzimba, Rashiya
Dzimba dzinochengetwa nemakambani epfuma kana nevaridzi vemba zvakananga. Zviri pachena kuti vashandirwi vakuru vaizopa vashandi vekunze pekugara. Mune ino kesi, ita shuwa kuti inzvimbo yakachengeteka yekugara uye inosangana nezvose zvakatarwa usati wafamba
Nzira yekuwana sei visa kuRussia?
January 10, 2022 Demi Rashiya, visa
Visa yeRussia imvumo muchimiro chechinamirwa chakanamatira pasipoti yevafambi. Ino gonesa muridzi wayo kujoina, kurarama, uye kusiya Russia mukati menguva yakapihwa. Inosanganisira ruzivo rwakadai se: Kupinda uye kuenda
Nzira yekuwana sei basa muRussia?
January 4, 2022 Demi mabasa, Rashiya
Russia ine mikana yakawanda yemabasa, uye kazhinji nyanzvi dzinobhadharwa zvakanyanya ndivo vatorwa. MaExpats anoshanda muRussia anoverengerwa pagumi nematatu mune runyorwa rwevanonyanya kuwana mari muna13. Vese vekunze vanoda kushanda muRussia vanofanirwa
October 30, 2020 Shubham Sharma India, Rashiya, famba, visa
Kunyorera vhiza yekushanyira Russia kubva kuIndia haina kuomesa maitiro sezvaingaite. Muchikamu chino, iwe uchazoziva iyo yakazara seti yeruzivo nezve Russian Visa yevaIndia. Iwe uchasvika pano: Zvakasiyana
Maitiro Ekudzidza muRussia: nhanho-ne-nhanho Gwara
April 28, 2020 Demi Rashiya, kudzidza
Kana iwe uchida kudzidza muRussia, sarudza chii uye kupi chaunoda kudzidza. Zvekare, tarisa kana iwe uchida kosi yekugadzirira yako Russian nekuti makosi mazhinji ari mumutauro weRussia. Ukangosarudza kuti ndechipi
Nzira yekunyorera sei asylum muRussia?
April 24, 2020 Shubham Sharma vapoteri, Rashiya
Ngatiti iwe unoda kunyorera hupoteri muRussia, saka unofanirwa kuenda kuFMS. Zvakare, iyo Federal Migration Service (FMS) ndiyo yega muviri muRussia inobata vapoteri nyaya. Kugamuchira chinzvimbo chevapoteri kana kuwana hupoteri kwenguva pfupi muRussia.